सीपीएलः सन्दिपले दिए आफ्नो दोस्रो ओभरमा मात्र १ रन ! [LIVE] – Everest Dainik – News from Nepal
सीपीएलः सन्दिपले दिए आफ्नो दोस्रो ओभरमा मात्र १ रन ! [LIVE]
काठमाडौं, साउन २५ । क्यारेबियन प्रिमियर लिगमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दिप लामिछानेको शानदार प्रदर्शन रहेको छ । उनको टिमले अहिले बलिङ गरिरहेको छ । र, सन्दिपले २ ओभर बलिङ गरेका छन् । उनले पहिलो ओभरमा २ रन दिदै एक विकेट लिएका थिए । भने, दोस्रो ओभरमा मात्र एक रन दिए । अरु बलरले भने खराब प्रर्दशन गरिरहेका छन् । थप जानकारीका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
अहिले सन्दिप आवद्ध सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस प्याट्रियट्स र गुयना एमेजन वारियर्स खेल भइरहेको छ । प्याट्रियट्सले ब्याटिङ गरिसकेको छ । यसअघिकप्तान क्रीस गेलको उत्कृष्ट प्रदर्शनसंगै सन्दीप सम्मिलित सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस प्याट्रियट्सले क्यारेबियन प्रिमियर लिगको आफ्नो पहिलो खेलमा १४७ रनको लक्ष्य दिएको छ ।